Uyithenga njani i-NEO | I-CryptoLog
Tyala imali kwi-NEO
Awukathengi i-NEO okwangoku? Sukulinda ngokude ukuba uthathe inyathelo.
I-67% yee-akhawunti zomtyali-mali ezithengisayo zilahlekelwa yimali xa kuthengiswa ii-CFDs nalo mboneleli. Kufuneka ucinge ukuba unako na ukuthatha umngcipheko omkhulu wokulahlekelwa yimali yakho.
Ii-asethi ze-Crypto ziimveliso zotyalo-mali ezingalawulekiyo. Akukho khuseleko lomtyali we-EU.
Emva kokwazi iimpawu ezizodwa zikaNeo unokuba nomdla wokuzifumana.
Into yokuqala, ngokusengqiqweni, iya kuba faka isipaji sikaNeo ukubagcina phi. Nje ukuba uziqhelanise nesipaji, unokuthatha isigqibo sokuthenga iNeo kuba sele unayo idilesi apho uzokufumana khona.
Ukuthenga uNeo kufuneka uqale ubone ukuba ufuna ukubathenga ngantoniImali ye-fiat (i-Euro, iidola ...) okanye uyitshintshele kuyo nayiphi na enye imali yedijithali onayo.
>> Gcina imali kwi-NEO NGOKU
Amathuba awakho maninzi. I-Bitfinex ikuvumela ukuba ufumane i-Neo ngokutshintshela iidola zase-US. Ifuna ukubhaliswa, ukuchongwa kunye nokufaka iidola kwinkonzo emva koko kuthengwe uNeo kunye nazo. Ngelishwa ayinakwenziwa ngokuthe ngqo ngeeYurophu.
Indlela engathanga ngqo ihlala isenzeka. Unokuqala ukuthenga enye i-cryptocurrency efana neBitcoin okanye i-Ethereum ngeedola okanye i-euro kunaniselwano oluninzi olusebenza ngemali ye-fiat. Kwaye ngoku, ngenye yezo cryptocurrencies kulula ukuyifumana uNeo.
Umzekelo: unokuthenga i-Bitcoin okanye i-Ethereum kwi:
bitcoin.de-Utshintshiselwano lwaseJamani olusebenza kakuhle kakhulu eYurophu. Isebenza ngenkqubo yedumela. Xa uthatha isigqibo sokuthenga, kuya kufuneka wenze udluliselo lwebhanki kumthengisi kwaye xa ekwazisa ukuba uyifumene, ke i-BTC okanye i-ETH yokuba ukugcinwa kwenkonzo kuthunyelwa kuwe. Ukuba kukho nakuphi na ukungavisisani, benza njengabalamli. Uya kubonisa ukuba ulwenzile utshintsho kwaye ukuba yonke into ichanekile, ungquzulwano luya kusonjululwa endaweni yakho. Xa ukhetha abathengisi abanamanqanaba amahle akufuneki kubekho ngxaki. Ngokwam, andikaze ndive nakuphi na ukuphazamiseka kule ndawo.
LocalBitcoin y Indawo yoLuntu-Zizalathiso ezibini zokuthenga enye kunye ne-imali yedatha yedijithali kubathengisi bendawo nakwabathengisi abakwi-Intanethi. Uya kuthenga eyangaphambili ngokuhlala ngokwasemzimbeni kwindawo ethile kunye neyokugqibela ngenkqubo abayicebisayo kwinkcazo yentengiso yabo. Isebenza kunye nenkqubo yodumo ke kuhlala kufanelekile ukukhetha abo banezinto ezininzi ezintle. Amaxabiso ayahluka nangona ungafumana izibonelelo ezilungileyo kakhulu.
Zininzi iindlela zokutshintshiselana apho unokuthenga khona uNeo. Ezona ziphambili zezi: Binance, Bittrex, Kucoin, Ikhonkco o Bitfinex. Ndicebisa ukusebenzisa iBitcoin okanye i-Ethereum kuba kuzo zonke kukho isibini sokutshintshiselana. Ukuba unayo enye imali yedijithali kuya kufuneka uyilayishe kwenye yezi nkonzo (ukuba bayayamkela), batshintshele i-BTC okanye i-ETH kwaye uthenge iNeo ngenye yezi.
Thenga uNeo ngendlela elula
Njengenye indlela yokutshintshiselana ngokwesiko, kukho iinkonzo zotshintshiselwano "kubhabho" ezingadingi ukubhaliswa okanye oku kubandakanya ukufaka i-imeyile kunye nokukhetha igama eligqithisiweyo. Ngamanye amaxesha, njengomzekelo esiza kuwusebenzisa, qinisekisa inombolo yefowuni. Ezi nkonzo zikuvumela ukuba utshintshisane uluhlu olubanzi lweemali ezixabisekileyo kunye. Inkqubo iyakhawuleza kwaye iyabonakala. Umzekelo wolu hlobo lotshintshiselwano ngu CoinSwitch.
Kwi-CoinSwitch kufuneka ukhethe i-imali yedatha oza kuyithumela kutshintshiselwano nge-Neo.
Mane ubeke imali ofuna ukuyichitha kwi-drop-down yokuqala, khetha uNeo kwesesibini kwaye iya kukuxelela ukhetho olukhoyo.
Nje ukuba ukhethe ukhetho olukhethayo Kuya kufuneka ufake idilesi yakho yeNeo kuphela kwaye idilesi oya kuthi uyithumele kuyo imali oza kuyisebenzisa ukuthenga iya kuvela. Kulo mzekelo sisebenzisa iBicoin.
Kwiskrini esilandelayo, yonke idatha yokuthengiselana iya kuvela ukuze uqinisekise ukuba iyenziwa, uza kufumana ntoni, njl. Unokuzinikezela kwenye into okoko nje kungekho mfuneko yokugcina ikhusi livulekile kuba intengiselwano iqhubeka kwaye kuxhomekeke kuphela kwisantya esenziwa ngaso kwiBlockchain yakho.
Oku kukuthi, kum, indlela elula kunye namaxabiso anikezelayo anomdla kakhulu. Ke ukuba sele unayo nayiphi na imali yedijithali ofuna ukuyisebenzisa ukufumana uNeo, lukhetho olufanelekileyo.
Recuerda que UNeo akahluleki. Ungathumela kuphela okanye ufumane inani elipheleleyo elincomekayo elivela kuNeo. Ngamanye amagama, akukho zisombululo. Ukuba into oza kuyitshintsha ilingana no-1,23 Neo, akunakwenzeka ukuba uthumele icandelo lokugqibela kwaye, ngenxa yoko, uyakufumana i-1 Neo. Kuyacetyiswa ke ukuba utshintshe isixa esinexabiso kuNeo lisondele kwixabiso elipheleleyo elingezantsi kodwa libe ngaphezulu kancinci. Kungenxa yokuba kunokubakho umahluko phakathi kwexabiso elibonisiweyo ngaphambi korhwebo kunye nexabiso lokugqibela oza kulifumana. Yinto encinci efihlakeleyo kodwa okwangoku ixabiso likaNeo alikho likhulu kangangokuba kufanelekile. Ewe kunjalo, ukuba ixabiso lalo liyakhuphuka, izigqibo ozifumanayo zinokuba yingxaki. Kodwa ke, yile nto ingohlukanisekanga.
1 Tyala imali kwi-NEO
2 Ngemali ye-fiat
3 Ngezinye ii-cryptocurrencies
4 Thenga uNeo ngendlela elula